China 500ml Leaf Shine Spray ဖုန်မှုန့်များကို ဖယ်ရှားပြီး အပင်များအတွက် အရွက်များ Glossy Spray ထုတ်လုပ်သူနှင့် ရောင်းချသူများ | ပင်းဝေ
500ml Leaf Shine Spray သည် ဖုန်မှုန့်များကို ဖယ်ရှားပြီး အပင်များအတွက် အရွက်များကို တောက်ပစေပါသည်။
အလွန်တန်ဖိုးရှိသော မျက်နှာပြင် သန့်ရှင်းရေး...
ပါတီကို နှစ်သက်သော Santa Snow Spr...
Foo အတွက် အသံကျယ်သော လေဟွန်း
1. အန္တရာယ်မရှိသော လတ်ဆတ်သောမွှေးရနံ့များ
4.superior quality, နောက်ဆုံးပေါ်စျေးနှုန်း
အရွက်တောက်ခြင်းဆိုတာ ဘာလဲ၊ အရွက်တောက်ခြင်း (သို့) တောက်ပမှုကို ဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတာ ကျွန်ုပ်တို့ သိနိုင်ပါတယ်။ Leafshine သည် သင့်အပင်၏အရွက်များ၏တောက်ပသောအရောင်အဆင်းအပြင် သင့်ပန်းစည်း၏ဖြတ်တောက်ထားသောသစ်ရွက်များ၏တောက်ပမှုကိုထိန်းသိမ်းရန်ကူညီပေးသည်။ သဘာဝအတိုင်း တောက်ပတဲ့အသွင်အပြင်ကို ပေးစွမ်းတာကြောင့် လန်းဆန်းပြီး အလွန်အသက်ဝင်စေပါတယ်။ အောက်ဖော်ပြပါပုံများသည် သစ်ရွက်ခြောက်များ၏ အလုပ်လုပ်ပုံကို ပြသထားသည်။
အရွယ်အစား H:190mm၊ D:65mm
ထုပ်ပိုးမှုအရွယ်အစား 37x 28x17.2 cm/ctn
ထုပ်ပိုးမှုအသေးစိတ် အညိုရောင်သေတ္တာတစ်ခုတွင် 12 pcs / စိတ်ကြိုက်ထုပ်ပိုး
တခြား OEM လက်ခံပါသည်။
အရွက်ရှိုင်းအရွက်များကို သဘာဝအတိုင်း ကျန်းမာစေပြီး အဆီမပြန်စေဘဲ အဆီပြန်သော အကြွင်းအကျန်များကို ချန်ထားသော အရွက်တောက်ခြင်းနှင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက မျက်နှာပြင်ကို ပိုမိုသန့်ရှင်းစေသည်။ ၎င်းသည် သာယာသော၊ သဘာဝအနံ့ရှိပြီး ၎င်း၏ sprayer nozzle ကြောင့် အသုံးပြုရလွယ်ကူသည်။ သဘာဝ သို့မဟုတ် အများစုအတွက် သင့်လျော်သည်။အတုအပင်များကျိုးလွယ်သော သို့မဟုတ် အမွေးရှိသော အရွက်များ၊ အရည်ရွှမ်းသော အရွက်များနှင့် ဖရုံပင်များမှ လွဲ၍ ပန်းပွင့်များနှင့် ဘူးသီးများပေါ်တွင် မဖြန်းသင့်ပါ။
သစ်ရွက်တောက်ပမှုသည် အချိန်ကုန်သက်သာပြီး ကြိုးစားအားထုတ်မှုသာဖြစ်သောကြောင့် သင့်အစစ်အမှန်နှင့် ပလပ်စတစ်အပင်များ၏ အရွက်များပေါ်တွင် ပမာဏအနည်းငယ်ဖြန်းပေးခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့ကို ချက်ချင်းတောက်ပလာစေမည်ဖြစ်သည်။ အသုံးမပြုမီ ဖြန်းဆေးကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် လှုပ်ခါပြီး 30cm ခန့်အကွာတွင် ဖြန်းပါ။ အခြောက်မြန်တဲ့အတွက် အဝတ်နဲ့ သုတ်စရာမလိုပါဘူး။ အမှန်တကယ်ပင်၊ ၎င်းသည် သင်၏ လျင်မြန်သော နေထိုင်မှုပုံစံတွင် အိမ်တွင်းအပင်များနှင့် ပလပ်စတစ်အပင်များကို ဂရုစိုက်ရန် လွယ်ကူစေသည်။ ပြောင်လက်တောက်ပသော အင်္ကျီကို ထိန်းသိမ်းရန် တစ်လလျှင် နှစ်ကြိမ် ဖြန်းပေးပါ။
အသုံးမပြုမီ ကောင်းစွာလှုပ်ခါပါ၊ အရွက်မှ 15-20 စင်တီမီတာ အကွာအဝေးတွင် ဖြန်းပေးပါ။ အရွက်များ ဖုန်မှုန့်များ၊ ရေစွန်းထင်းမှုများ၊ ကယ်လ်စီယမ်အစက်အပြောက်များ စသည်တို့ဖြင့် ဖုံးလွှမ်းနေပါက၊ ဆေးဖြန်းပြီးပါက အဝတ်ဖြင့် အလွယ်တကူ သုတ်နိုင်သော်လည်း အရွက်သည် တောက်ပနေသေးသည်။
၁။ မျက်လုံး သို့မဟုတ် မျက်နှာနှင့် ထိတွေ့ခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပါ။
3. Pressurized ကွန်တိန်နာ။
4. နေရောင်ခြည် တိုက်ရိုက်မထိအောင် ထားပါ။
5. အပူချိန် 50 ℃ (120 ℉) အထက်တွင် မသိမ်းဆည်းပါနှင့်။
6. အသုံးပြုပြီးသည်နှင့်ပင် အပေါက်ဖောက်ခြင်း သို့မဟုတ် မလောင်ကျွမ်းစေရပါ။
7. မီးတောက်များ၊ မီးခိုးငွေ့များ သို့မဟုတ် အပူအရင်းအမြစ်များအနီးတွင် မဖြန်းပါနှင့်။
8. ကလေးများ၏ လက်လှမ်းမမီသော နေရာတွင် ထားပါ။
9. အသုံးမပြုမီ စမ်းသပ်ပါ။ အထည်များနှင့် အခြားမျက်နှာပြင်များကို စွန်းထင်းစေနိုင်သည်။
1. မျိုချမိပါက အဆိပ်ထိန်းစင်တာ သို့မဟုတ် ဆရာဝန်ထံ ချက်ချင်းခေါ်ပါ။
၂။ အော့အန်ခြင်းကို မဖြစ်စေရ။
မျက်လုံးထဲရှိလျှင် အနည်းဆုံး ၁၅ မိနစ်ခန့် ရေဖြင့် ဆေးကြောပါ။
ယခင်- Holi ပွဲတော်ကျင်းပရန်အတွက် 200ml ပါတီ fiesta de Espuma နှင်းဖြန်းဆေး
နောက်တစ်ခု: ပါတီသည် ခရစ္စမတ်သစ်ပင်အလှဆင်ရန်အတွက် ခရစ္စမတ်အတု9အောင်စ ဘူးခွံကို နှစ်သက်သည်။